Isku-darka DMP: Ganacsiga Xogta Lagu Wado ee daabacayaasha | Martech Zone
Isku-darka DMP: Ganacsiga Xogta Lagu Wado ee daabacayaasha
Jimco, Juun 12, 2020 Jimco, Juun 12, 2020 Elena Podshuveit
Hoosudhaca xagjirka ah ee helitaanka xogta dhinac saddexaad waxay ka dhigan tahay fursado yar oo la beegsanayo habdhaqanka iyo hoos u dhaca dakhliga xayeysiinta ee milkiilayaasha warbaahinta badan. Si loo dheellitiro qasaaraha, daabacayaashu waxay u baahan yihiin inay ka fikiraan qaabab cusub oo loola macaamilo xogta isticmaalaha. Kireynta mashiinka maareynta xogta waxay noqon kartaa wado looga baxo.
Labada sano ee soo socota gudaheeda, suuqa xayeysiinta ayaa wajihi doona cookies-ka saddexaad, kaas oo wax ka beddeli doona qaab-dhaqameedka bartilmaameedka adeegsadayaasha, maareynta meelaha xayeysiiska ah, iyo ololeynta raadinta.
Websaydhka, saamiga isticmaalayaasha ee lagu caddeeyay cookies-ka saddexaad ayaa u janjeeraya xagga eber. Habka dhaqameed ee raadraaca biraawsarka iskutallaabta ah ee bixiya macluumaadka dhinac saddexaad iyo iibiyeyaashu dhowaan way duugoobi doonaan. Marka, muhiimada xogta kooxda-koowaad ayaa kici doonta. Daabacayaasha iyagoon lahayn awooddooda xog aruurin u gaar ah waxay la kulmi doonaan dib u dhacyo waaweyn, halka ganacsiyada uruuriya qeybaha adeegsigooda ay kujiraan booska u gaarka ah si ay u goostaan ​​abaalmarinta muuqaalkan xayeysiinta ah.
Uruurinta iyo maaraynta xogta kooxda-koowaad waxay u abuureysaa fursado gaar ah daabacayaasha kobcinta dakhligooda, hagaajinta khibrada nuxurka, kaqeybgalka, iyo dhisida kuwa raacsan oo daacad ah. Kireynta xogta-xisbiga koowaad waxaa loo isticmaali karaa shaqsiyeynta shakhsi ahaaneed iyo u habeynta farriimaha xayeysiinta ee loogu talagalay kor u qaadista bogagga internetka.
Business Insider wuxuu u adeegsadaa xogta habdhaqanka si uu u horumariyo astaamaha akhristayaashiisa ka dibna wuxuu u adeegsadaa macluumaadkaas si uu ugu shaqsiyeeyo joornaalada emaylka iyo talo soo jeedinta mawduucyada si uu si fiican ugu hawlgeliyo akhristayaasha Dadaalladaasi waxay kordhiyeen sicirradooda gujintu xayeysiiska ah ee 60% waxayna sare u qaadeen qiimaha gujiska ee joornaalada ay ku soo diraan emailladooda by 150%.
Maxay Daabacayaashu Ugu Baahan Yihiin DMP
Sida laga soo xigtay Admixer tirakoobka gudaha, celcelis ahaan, 12% miisaaniyadaha xayeysiinta ayaa lagu kharash gareeyay soo iibinta xogta-qeybta koowaad ee bartilmaameedka dhagaystayaasha. Marka laga takhaluso cookies-ka saddexaad, baahida loo qabo xogta si aad ah ayey u kordheysaa, iyo daabacayaasha ururiya xogta kooxda koowaad waxay ku sugan yihiin meel ku habboon in laga faa'iideysto.
Haddana, waxay u baahan doonaan wax lagu kalsoonaan karo madal maaraynta xogta (DMP) si loo hirgeliyo moodeel ganacsi oo xogta ku saleysan. DMP ayaa u oggolaan doonta iyaga inay si wax ku ool ah u soo dhoofsadaan, u dhoofiyaan, u falanqeeyaan, iyo, ugu dambeyn, lacag ka helaan xogta. Xogta kooxda koowaad waxay xoojin kartaa tirakoobka xayeysiinta waxayna bixin kartaa ilo dakhli oo dheeri ah.
DMP Isticmaal Kiis: Simpals
Simpals waa guriga ugu weyn ee warbaahinta internetka ee Moldova. Raadinta durdurro dakhli oo cusub oo lagu kalsoonaan karo, iyagu iskaashi la leh DMP si loo dejiyo ururinta xogta kowaad iyo falanqaynta isticmaalaha ee 999.md, oo ah barxadda e-commerce ee Moldavian. Natiija ahaan, waxay ku qeexeen 500 qaybood oo dhagaystayaal ah oo ay hadda si barnaamij ah ugu iibiyeen xayeysiistayaasha iyagoo adeegsanaya DMP.
Isticmaalka DMP wuxuu bixiyaa lakabyo xog dheeri ah oo loogu talagalay xayeysiiyaasha, iyadoo kor loo qaadayo tayada iyo CPM ee dareenka la bixiyay. Xogtu waa dahabka cusub. Aynu tixgelinno qaybta ugu muhiimsan ee abaabulka xogta daabacayaasha iyo xulashada adeeg bixiye tiknoolaji ah oo ku habboon baahiyaha ganacsiga ee noocyada kala duwan ee daabacayaasha.
Sidee Loogu Diyaar garoobaa Isdhexgalka DMP?
Data collection - Marka ugu horreysa, daabacaadyaashu waxay u baahan yihiin inay si nidaamsan u baaraan dhammaan xog ururinta ku jira barnaamijyadooda. Tan waxaa ka mid ah diiwaangelinta boggaga internetka iyo barnaamijyada moobiilka, is-qoritaanka shabakadaha Wi-Fi, iyo dhacdooyin kale oo kale oo dadka isticmaala lagu dhiirrigeliyo inay ka baxaan xogta shakhsiga ah. Iyadoo aan loo eegin meesha ay xogtu ka timaado, ururinta iyo keydinta waa inay u hoggaansamaan qaabdhismeedka sharci ee hadda jira GDPR iyo CCPA. Mar kasta oo ay daabacayaashu soo ururiyaan macluumaadka shakhsiyeed, waxay u baahan yihiin inay helaan oggolaanshaha isticmaaleyaasha, oo ay uga tagaan iyaga oo leh suurtogalnimada inay ka baxaan.
Ka shaqeynta macluumaadka - Kahor intaadan dusha ka saarin DMP, waxaad u baahan tahay inaad ka baaraandegto dhammaan xogtaada, kuna heshiiso qaab hal ah, oo aad ka saarto nuqullada. Si loo dejiyo qaab isku mid ah oo loogu talagalay xogta, waxaa muhiim ah in la doorto hal aqoonsi oo gaar ah, oo ku saleysan sida aad u qaabeyn doonto xogtaada. Xulo midka si fudud u aqoonsan kara isticmaalaha, sida lambar taleefan ama emayl. Waxay sidoo kale fududeyn doontaa isdhexgalka haddii aad u qaybiso xogtaada qaybo sida ku xusan dhagaystayaasha ugu waxqabadka fiican.
Sidee laysugu daraa DMP?
Mid ka mid ah hababka ugu hufan ee isku xidhka DMP ayaa ah la dhexgeli CRM iyada oo loo marayo API, waafajinta UniqueIDs. Haddii CRM-gaaga lagu daro dhammaan hantidaada dijitaalka ah, wuxuu si otomaatig ah ugu gudbin karaa xogta DMP, taas oo kobcin karta oo kobcin karta.
DMP ma hayso macluumaadka shaqsiyaadka lagu aqoonsan karo. Marka DMP lagu dhex daro API ama faylka soo dejinta, waxay heleysaa xirmo xog ah oo isku xireysa aqoonsiga daabacaha iyo aqoonsiga isticmaalaha gaarka ah ee aad ku qeexday talaabadii hore.
Marka la eego isdhexgalka iyada oo loo marayo CRM, waxaad ku wareejin kartaa xogta qaab isku buuqsan. DMP ma qeexi karto xogtan, waxayna ku maamuli doontaa qaabkan sirta ah. DMP waxay xaqiijineysaa asturnaanta iyo amniga macluumaadka isticmaaleha, illaa iyo intaad hirgelisay ku-qoris iyo ku-qorid sir ah oo kugu filan.
Waa maxay shaqeynta ay tahay in DMP yeelato?
Si loo doorto DMP-ka ugu fiican ganacsigaaga, waxaad u baahan tahay inaad qeexdo shuruudahaaga loogu talagalay bixiyaha tikniyoolajiyadda. Tan ugu muhiimsan, waxaad u baahan tahay inaad liis garayso dhammaan isku dhafka farsamada lagama maarmaanka ah.
DMP waa inaysan carqaladeynin howlahaaga waxayna u baahan tahay inay ka shaqeyso kaabayaasha farsamada ee hadda jira. Tusaale ahaan, haddii aad horey u haysatid barxad CRM, CMS, iyo isku-dhafnaan la-hawlgalayaal dalab ah, DMP-ga la doortay waa inuu la jaan qaadayaa dhammaantood.
Intaad dooranaysid DMP, tixgeli dhammaan awoodaha farsamo ee jira, si isdhexgalka uusan culeys ugu noqon kooxdaada farsamada. Waxaad ubaahantahay barxad si wax ku ool ah u gaarsiin laheyd howlaha muhiimka ah: aruurinta, qeybinta, falanqeynta, iyo lacag sameynta xogta.
Maareeyaha Tag - Kadib markaad iskudarsato xogtaada jira DMP-gaaga, waxaad ubaahan doontaa inaad uruuriso dhibco xog dheeri ah. Si taas loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad ku dhejiso calaamado ama pixels bogaggaaga internetka. Kuwani waa xadhkaha koodhka ururiya xogta ku saabsan habdhaqanka isticmaale ee meheradahaaga ka dibna ku duub DMP. Hadday tan dambe leedahay maareeyaha tag, waxay awoodi doontaa inay la socoto tags-ka shabakadahaaga dhexe. In kasta oo ikhtiyaari ah, waxay badbaadin doontaa kooxdaada farsamada waqti iyo dadaal badan.
Qeybinta iyo Taksiinimada - DMP-gaagu waa inuu leeyahay astaamo kala duwan oo loogu talagalay kala-soocidda xogta iyo falanqaynta. Waa inay awood u yeelato inay aasaasto taxonomy, qaab-dhismeed xog-geed u eg oo qeexaya isku-xirnaanta qaybahaaga xogta. Waxay u oggolaan lahayd DMP inay qeexdo xitaa qaybaha cidhiidhiga ah ee xogta, si qoto dheer u falanqeyso, una qiimeyso iyaga ka sarreeya.
Isdhexgalka CMS - Muuqaal heer sare ah oo DMP ah ayaa ah awooda lagu dhexgalinayo websaydhkaaga CMS. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad si firfircoon u hagaajiso waxyaabaha ku jira boggaaga oo aad la kulanto baahiyaha isticmaalayaashaada.
lacagaynta - Ka dib markaad dhex gasho DMP, waxaad u baahan doontaa inaad barato sida loo kiciyo xogta loogu talagalay lacag-ururinta dheeraadka ah ee dhinacyada baahida loo qabo (DSP). Waa muhiim in la doorto DMP oo si fudud ugu dhex milmi kara wada-hawlgalayaasha dalabaadkaaga.
Qaar ka mid ah DSPs waxay bixiyaan DMP hooyo, oo si adag ugu dhex jira nidaamkooda deegaanka. Waxaa muhiim ah in la ogaado in DMP lagu dhex daray hal DSP ay noqon karto xal wax ku ool ah, iyadoo kuxiran xaalada suuqaaga iyo muuqaalka tartanka.
Haddii aad ka shaqeyso suuq yar, halkaas oo DSP gaar ah uu yahay ciyaartoy awood leh, adeegsiga dalkooda hooyo DMP waxay noqon kartaa tallaabo caqli badan. Haddii aad ka shaqeyso suuq weyn, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato sida ugu fudud ee DMP ay ula qabsan karto barnaamijyada dalabaadka waaweyn.
Is-dhexgalka server-ka - Muuqaal kale oo muhiim ah ayaa ah awoodda aad u adeegsan karto xogtaada. Daabacayaasha badankood waxay adeegsadaan adeege xayeysiis ah si ay toos ula shaqeeyaan wakaaladaha iyo xayeysiiyaasha, u bilaabaan ololahooda xayeysiinta, iskutallaab ku gudbiyaan, ama ku iibiyaan taraafikada harsan Sidaa awgeed, DMP-gaagu wuxuu u baahan yahay inuu si fudud ula midoobo server-kaaga xayeysiiska ah.
Fikrad ahaan, adeegahaaga xayeysiiska ahi waa inuu maareeyaa hantida xayeysiinta dhammaan meheradahaaga (websaydhka, barnaamijka moobiilka, iwm.) Oo uu ku beddelato xogta CRM-gaaga, taas oo, markaa, ula xiriiri doonta DMP. Moodalka noocan oo kale ah wuxuu si weyn u fududeyn karaa dhammaan isku-darka xayeysiintaada, oo wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si cad ula socoto lacag-bixinta. Si kastaba ha noqotee, tani had iyo jeer maahan kiiska, oo waxaad u baahan tahay inaad hubiso in DMP ay si habsami leh ula shaqeyso server-kaaga xayeysiiska ah.
Waa muhiim in bixiyaha tikniyoolajiyadda aad dooratay u hoggaansamo shuruucda asturnaanta adduunka iyo xeerarka amniga xogta. Xitaa haddii aad si gaar ah diiradda u saarto xogta suuqa maxalliga ah, weli waad ka heli kartaa isticmaaleyaasha meel kasta oo adduunka ah.
Cunsur kale oo muhiim ah in laga fiirsado ayaa ah cilaaqaadka bixiyaha DMP iyo xayeysiistayaasha iyo la-hawlgalayaasha maxalliga ah. Ku soo biirista kaabayaasha midaysan ee iskaashatooyinka aasaasiga ah waxay fududeyn kartaa isdhexgalka meheradahaaga waxayna hagaajineysaa lacag-soo-saarka hantidaada dijitaalka ah.
Sidoo kale waa lagama maarmaan in la doorto lammaane tiknoolaji ah oo aan ku siineynin oo keliya is-dhexgal is-adeegsi oo buuxa laakiin sidoo kale ku siinaya hagitaan wax ku ool ah, jawaab celin, iyo la-tashi. Daryeelka macaamiisha ee ugu sarreeya waa mid loo baahan yahay in lagu xalliyo arrimo kasta oo loo habeeyo istiraatiijiyadda maareynta xogtaada.
Tags: kaftanadtechdhirta iskutallaabtamaamulka xiriirka macaamiishaxog aruurintakobcinta waxyaabaha firfircoonxogta-koowaadjaangooyntaemayllada shaqsi ahaaneedbartilmaameedkacashuurtaxogta dhinac saddexaad
Elena Podshuveit waa Madaxa Sarkaalka Wax soo saarka ee Admixer. Waxay leedahay in ka badan 15 sano oo khibrad ah maaraynta mashaariicda dhijitaalka ah. Laga soo bilaabo 2016 waxay mas'uul ka ahayd khadka wax soo saarka Admixer SaaS. Xayeysiiska Elena waxaa ka mid ah bilowga guuleysta, mashaariicda loogu talagalay xayeysiistayaasha sare (Philips, Nestle, Ferrero Rocher, Kimberly-Clark, Danone, Sanofi), Xalalka SaaS, bilaabida xayeysiisyada internetka, iyo barnaamijyada moobiilka. Elena waxay kala tashatay guryaha daabacaadda ee waaweyn dijitaalkaynta iyo lacag-siinta hantidooda.